people Nepal » उपत्यकाको चक्रपथ चीनले आठ लेन बनाइदिने ! उपत्यकाको चक्रपथ चीनले आठ लेन बनाइदिने ! – people Nepal
उपत्यकाको चक्रपथ चीनले आठ लेन बनाइदिने !
माघ २१ , काठमाडौं।
चीनले काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ ५० मिटर चौडाइसहित पूरैखण्ड आठ लेनको बनाइ दिने भएको छ । २७ किलोमिटर लम्बाईको यो चक्रपथ हाल कलंकी-सातदोबाटो-कोटेश्वरखण्ड (१० किमि) चिनियाँ कम्पनी सांघाई कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले विस्तार गरिरहेको छ ।
बाँकी १७ किमि पनि विस्तार गर्न यही कम्पनी सहमत भएको सडक विभागको वैदेशिक महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले भने, ‘कलंकीबाट महाराजगन्जसम्मको आठ दशमलव दुई किमि सडक विस्तार गर्ने विषयमा दुई साता अगाडि औपचारिक सहमति भइसकेको छ।
अब यो खण्डमा पर्ने घर टहरा हटाउने, जग्गा खाली गरेर साइट क्लियर गर्ने पाटो हाम्रो हो। त्यसपछि चिनियाँ कम्पनीले निर्माण सुरु गर्नेछ।’चिनियाँ कम्पनीले तीन वर्षभित्र पूरै सडक अहिले विस्तार भइरहेको कलंकी-कोटेश्वर खण्डसरहकै बनाउने भएको छ। चिनियाँ कम्पनीले कलंकी-कोटेश्व खण्ड करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर स्तारोन्नति गरिहेको छ। कलंकी चोकमा अन्डरपाससहितको यो काम आगामी ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने योजना छ। पहिलो खण्ड सकेपछि कलंकीबाट बालाजु हुँदै महाराजगन्जसम्म विस्तार हुनेछ।
कलंकी-कोटेश्वरमा ८० प्रतिशत प्रगति
कलंकीदेखि कोटेश्वरसम्मको १० किमि सडक विस्तारको काम करिब ८० प्रतिशत पूरा भएको छ। काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजनाका सूचना अधिकारी निराजन अर्यालले मुख्य काम सकिएको र अब सडक निर्माण भएका स्थानलाई फिनिसिङ गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए। कलंकीको अन्डरपास पनि ८० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ। ६ महिनाभित्रै सकिने गरी तीव्र गतिमा काम भइरहेको जानकारी चिनियाँ पक्षले दिएको अर्यालले बताए।